Rwiyo rwaDhavhidhi. 138 Ndichakurumbidzai nemwoyo wangu wese.+ Ndichaimba ndichikurumbidzaiNdiri pamberi pevamwe vanamwari.* 2 Ndichakotama ndakatarisa kutemberi* yenyu tsvene,+Uye ndicharumbidza zita renyu+Nekuda kwerudo rwenyu rusingachinji uye kutendeka kwenyu. Nekuti makakudza zvamakataura uye zita renyu kupfuura zvimwe zvinhu zvese.* 3 Pazuva randakashevedzera, makandipindura;+Makandishingisa* uye makandisimbisa.+ 4 Madzimambo ese epanyika achakurumbidzai, haiwa Jehovha,+Nekuti achange anzwa vimbiso dzamakataura. 5 Achaimba nezvenzira dzaJehovha,Nekuti kubwinya kwaJehovha kukuru.+ 6 Kunyange zvazvo Jehovha akakwirira, anocherechedza vanozvininipisa,+Asi vanozvikudza anongovaziva vari kure.+ 7 Kunyange ndikafamba ndichipinda nepane njodzi, muchandichengetedza ndiri mupenyu.+ Munotambanudza ruoko rwenyu muchidzivisa hasha dzevavengi vangu;Ruoko rwenyu rwerudyi ruchandiponesa. 8 Jehovha achandiitira zvinhu zvese. Haiwa Jehovha, rudo rwenyu rusingachinji runogara nekusingaperi;+Musakanganwa mabasa emaoko enyu.+
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Ndisingatyi vamwe vanamwari, ndichakuridzirai rwiyo.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “makakudza zvamakataura kupfuura zita renyu rese.”
^ Kana kuti “Makashingisa mweya wangu.”